Satin gbatia - China J na K auto ngwa
ụgbọ ala cover
SBR oche cover
600D ịkwanyere akwado
600D eyi owu
Canavas oche cover
Window ọta cover
EPE ụfụfụ SNS 001
Ịkwanyere SNS 002
SNS 003 Magnetik
SNS 004 Top cover
SNS 005 ntị
SNS 007 mkpanaka
Pet oche cover
PSC002 Pet mgbochi
PSC006 n'akpa uwe otu
ụgbọ mmiri ekpuchi eluigwe na ala
ụgbọ mmiri cover customizing
console igbe cover
ụgbọ mmiri fenda cover
Ngwá Ọrụ akpa ụdị
doro anya ịkwanyere
Eriri ụdị wrape cover
Japan ụdị ọkara cover
Taia ogbe cover
Mapụtara taya cover
RV taya cover
Seat azụ nhazi
ámá egwuregwu fom
nchekwa taya cover
SMMS n'èzí ụgbọ ala cover
Boat fenda cover 2
Satin cover atụmatụ na uru: 1.Indoor ụgbọ ala cover. 2.Fleece akwado enye exta nchebe ụgbọala nke na agba. 3.It bụ n'ụzọ zuru ezu breathable, na-ụgbọ ala free nke ájá. 4.With n'ihu ma n'azụ na-agbanwe hem jide cover na ụgbọ ala. 5.With enweghị nkebi ịhụ technology 6.cost nso: Usd35 to55 7.stretchability nwere ike inyere aka acheive na snug kwesịrị ekwesị ụgbọ ala, na-egosi mmekọahụ anya nke ụgbọ ala. Ihe info: ihe nwere ike ịbụ na-acha uhie uhie ma ọ bụ nwa ma ọ bụ ndị ọzọ na agba ị na-ahọrọ, na ibu nwere ike ịbụ site 150gsm ka 200gsm ka ...
Min qty: 50-10000
Port: Ningbo ma ọ bụ Shanghai
Ịkwụ Ụgwọ: 30% in advance, rest against copy of shipment paper.
Here we show are examples we do or develope for clients, for detail or to know more, belive that our expericed knowledage will give you satisfied solution, write us to info@jkcorp.cn, your mail will be replied within 24 hours, thank u.
Satin cover atụmatụ na uru:
1.Indoor ụgbọ ala cover.
2.Fleece akwado enye exta nchebe ụgbọala nke na agba.
3.It bụ n'ụzọ zuru ezu breathable, na-ụgbọ ala free nke ájá.
4.With n'ihu ma n'azụ na-agbanwe hem jide cover na ụgbọ ala.
5.With enweghị nkebi na-ahụkwa ụzọ technology
6.cost nso: Usd35 to55
7.stretchability nwere ike inyere aka acheive na snug kwesịrị ekwesị ụgbọ ala, na-egosi mmekọahụ anya nke ụgbọ ala.
Ihe nwere ike ịbụ na-acha uhie uhie ma ọ bụ nwa ma ọ bụ ndị ọzọ na agba ị na-ahọrọ, na ibu nwere ike ịbụ site 150gsm ka 200gsm dị ka ị na-ahọrọ, ihe arọ ọzọ inogide, na ndị ọzọ dị oké ọnụ.
Udi na size nke cover
Anyị na-enye eluigwe na ala na customizing ma ụdị, dị ka emeputa, ị na-nnọọ ka ajuju na ido ihe ị chọrọ, anyị ga-enwe na gị ọrụ mgbe niile.
Na-arụ ọrụ na anyị, anyị ga-ezute gị requirment mee Sedan, SUV, Van, RV na ndị ọzọ ị na-atụ anya.
Gịnị mere eji ụgbọ ala cover- chebe gị nke, ịzọpụta ụwa-erughị saa ala ụgbọ ala gị.
Car cover nwere ike ịbụ dustproof, waterproof, na mgbochi UV, ka unu wee debe ụgbọala gị n'ebe ájá, nnụnụ na osisi droppings nakwa dị ka hazord mmiri ozuzo iji chebe ụgbọala nke na agba, na-echebe ime nke ụgbọ ala, dị ka gbaara osisi, oche cover . Nọgidenụ ohi pụọ, mgbe ụfọdụ, gị valueable nwere ma eleghị anya, na-echebe kwa-enweghị ịbụ hụrụ mfe n'ihi na cover zoo ala ụgbọ ala gị.
Ịzọpụta ụwa site obere ugboro nke bụ ịsa ụgbọ ala gị.
J na K Auto-ngwa bụ emeputa na akara si 2009, na-arụ ọrụ na nnukwu ụgbọ ala cover factory n'ụgbọ na mbubata na ngwa dealer n'ụgbọ si America na Europe, enye ahịa ọkachamara ọrụ si ngwaahịa onwe ya ahia ọrụ.
Onye Mmekọ mgbe na-arụ ọrụ: Ferrari, Coverking, Polo Motor, DS ekpuchi, 3 Lines, UKCC, Sparco wdg
Na-atụ anya na ị ga-esote onye na anyị na ndepụta.
Previous: Single Layer Nonwoven Indoor
Osote: Satin gbatia 1
Car Isi cover
Car Full Isi Cover
Car Mbukota Cover
Car nku Cover
Cheap Car Side Mirror Cover
Customizing Car Cover
Njọ Car Cover
kpara Fabric Car Cover
Pee Disposable Car Cover
Pee Plastic Car cover
Pee Piel Car Cover
Buru Up Car Cover
Buru Up Truck Car Cover
ịkwanyere SUV Car Cover
Piel Car Cover
Waterproof Car ekpuchi
Single Layer Nonwoven Indoor 1
Silver nche 300D N'èzí
Satin gbatia 1
otu oyi akwa na ụzọ
Silver nche 150D
Ekwentị: 86 574-87576300